Shaqaalihii Shiineeska oo la oggolaaday in ay si kooban u sii joogaan dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqaalihii Shiineeska oo la oggolaaday in ay si kooban u sii joogaan dalka
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 16.30
Lixdii shaqaale Shiineeska ee ku shaqaaleysaa hanaanka ku meel gaarka ama muqaawilka, ayna shalay ka hadashay laanta Ekot qeybteeda galbeedka, ayaa hadda loo oggolaaday in ay ku sii negaadaan Iswiidhen, sida lagu shegay warbixin afka ah oo hay’adda socdaalka siisay ururka shaqaalaha ganacsiga.
Toddobaadkan ayaa saxaafadda waxay ka hadashay kiiska shaqaalahan ka soo jeeda dalka Shiinaha, kana howl galayay shirkad la yiraahdo Asian Food oo fadhigeedu yahay magaaladda Göteborg,waxaana la wariyay in shaqaalaha ay qaadanayen mushahar aad ugu yar inta caadiga ah ee lagu shaqeeyo, waxayna toddobaadkii shaqeynayeen 80 saacadood oo aan laheyn wax fasax aah, waxaana la dejiyay guryo aan laheyn biyo kulul.
Anne-Maj Lindblom oo ka shaqeysya ururka mideeya shaqaalaha ka how gala xarumaha ganacsiga ayaa sheegtay in bishii Maarso loo gudbiyay waaxda socdaalka codsi ruqsad shaqo oo ay doonayaan shaqaalaha Shiineeska basle ilaa hadda uusan jirin go’aan. Balse go’aanka hadda ayay sheegtay in uu yahay mid u oggolaanaya shaqaalahan in ay ku sii negaadeen dalka horena xitaa aan laheyn wax sidaasi oranaya.
Shirkada ay u shaqeynayeen lixdani ruux ee shaqaalaha ayaa dooneysa in dib loogu celiyo dalkooda.
– Ma ahan wax gaari kara go’aanka ah in shaqaalahan dalkooda lagu celiyo shirkada ay u shaqeynayeen, ee hay’adda socdaalka waxa qaadan kara go’aanka ceynkaasi ah, ayay tiri Anne-Maj Lindblom.
Shaqaalahan Shiineyska ayaa hadda ka diiwaan gashan xafiiska shaqada ee arbetsförmedlingen ka dib markii sidaasi lagu caawiyay, waxayna sheegtay Anne-Maj Lindblom in xaaladooda ay maanta ka waangsan tahay markii laga soo kaxeeyay shirkada ay ka shaqeynayeen xilligaasi oo ah ahaayeen hoy la’aan waxayna sheegtay in weli uu jiro xiriir lala leeyahay shirkada Asia Food oo laga wada hadlayo mushahro aysan bixin.